Tag: paikady automatisation marketing | Martech Zone
Tag: paikady automatisation marketing
Ahoana no fomba hampiasanao ny tetikady mahomby amin'ny automatisation marketing? Ho an'ny orinasa maro dia ity ny fanontaniana an-tapitrisany (na mihoatra) dolara. Ary fanontaniana tsara apetraka izany. Na izany aza, tsy maintsy manontany ianao aloha, inona no manasokajy ny paikady automatisation marketing mahomby? Inona ny tetikady mahomby amin'ny marketing ho an'ny marketing? Manomboka amin'ny tanjona na tanjona kendrena izany. Misy tanjona kendrena vitsivitsy izay manampy anao handrefy tsara ny fampiasana marketing automatique mahomby. Anisan'izany:
Ahoana ny fomba hamokarana ny mpitarika amin'ny alàlan'ny automatisation marketing
Alarobia, Aprily 22, 2015 Alarobia, Aprily 22, 2015 Douglas Karr
Nanoratra lalina izahay momba ny paikadin'ny automatisation marketing, ny fiasa manakiana, ary ny fanamby amin'ny fanatanterahana ireo paikady ireo hitarika fitarihana. Ny tanjon'ny automatisation marketing dia ny fametrahana ny elanelana misy eo amin'ny varotra sy ny varotra, ary amin'ny farany mitondra fitarihana lehibe mankany amin'ny departemanta fivarotana amin'ny fotoana mety. Manampy amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny firaka io ary hampihena ny ezaka ilaina amin'ny fanakatonana ny varotra. Amin'ny farany dia mampitombo ny isan'ny mitarika, ny sandany